Miaro amin'ny Semalt: Ahoana ny fomba fiasan'ny Internet
Misy endrika maromaro izay misy fanaovana hosoka atao ao amin'ny tranonkala. Ny Securities syNy kaomisiona Exchange dia manasongadina karazana hosoka amin'ny aterineto maro ao amin'ny tranonkalany. Lisa Mitchell, tompon'andraikitra eo amin'ny Customer Success of Semalt ,dia niresaka fohifohy ny sasany amin'ireo ho anao mba ho voaro amin'ny fanafihana an-tserasera - buy fake passports.
Fomba iray ahafahana manangona mpividy amin'ny alalan'ny finday amin'ny alalan'ny findaymandresy lahatra azy ireo hampiasa vola amin'ny tahiry manokana. Nahasarika mpanao hosoka ihany koa izy izay mampiasa fampitam-baovao ho an'ny mpampiasa vola miaraka amin'ny tanjona tokanany halatra.
Anisan'izany ny fandefasana mailaka amin'ny olona mahasarika izay milaza fa afaka mahazotombom-barotra goavana amin'ny fandraisana anjara kely. Ilay malaza indrindra dia ny hosoka Nizeriana izay ilàna mailaka voatondro ho avy amin'ny olona iray ao anatin'ny fahorianany fanampianao handefa vola amin'ny kaontinao. Ny fraudster dia manolotra ny kaontinao amin'ny banky mba handefasana ilay vola, izay tena marina,Ny tanjon'izy ireo dia ny hanambaka anao amin'ny sazy sy ny haba. Tokony ho very ny tahiry fampidiran-dresaka raha tokony ho latsaka ao anaty fandrika ianao.
Mitranga izany amin'ny alalan'ny ezaka iombonana amin'ny mpanoratra sy ny fampiasam-bola amin'ny Internetorinasa. Ny orinasa fampiasam-bola dia mandoa ireny mpanoratra ireny mba hahafahan'izy ireo manoratra vaovao manome tombony amin'ny fampiasana orinasa manokana.Ankoatra izany, tsy milaza izy ireo fa aloa noho ny soso-kevitr'izy ireo. Izany dia fampahalalam-baovao tsy mendrika izay mety ho mpampiasa voladia mihevitra ny tsy haha-mora amin'ny fanapahan-kevitra fandraisana anjara.
Ity dia misy fivarotana merina an-tserasera.Voalohany indrindra, ny mpivarotra dia mandray ny vola amin'ny mpividy fa tsy manolotra ny entana mihitsy. Ny fomba faharoa dia ny nanomezan'ny mpivarotra vokatraNy lanjany dia ambany noho ilay dokambarotra. Amin'ity tranga ity dia manome fampahalalana diso momba ny vokatra iray izy amin'ny tanjon'ny fanintonana mpividy bebe kokoa. TheNy mpanjifa dia mandoa bebe kokoa. Ny fomba fahatelo dia midika hoe lainga momba ny fe-potoana famenoana. Ny mpivarotra avy eo dia manolotra aty aoriana raha oharina. Farany, aNy mpivarotra dia mety tsy hampahafantatra fampahalalana mivaingana izay mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitry ny mpividy iray.
Ny Vaomiera momba ny varotra Federaly sy ny famaizana Auction
Tafiditra ao anatin'izany ireo mpivarotra mamoafady izay mametraka bidy amin'ny vokatra avy amin'ny mpivarotramanosika ny vidin-tsolika, mandidy avo lenta haka ireo mpividy hafa ary manaisotra ny bidy mba hahazoany vokatra amin'ny vidiny ambany ary farany mandaingaho an'ny mpanjifa mba hahafahany mahazo vokatra namboarina amin'ny tranokala ara-dalàna amin'ny vidiny ambany kokoa ivelan'ny sehatra. Rehefa manaraka ny tadiny izy ireo,Lasa mifankatia izy ireo.
Ny antsipirian'ny tra-boina dia ampiasaina mba hahazoana zavatra manan-danja toy ny fiarafahazoan-dàlana sy karatra fiara. Ny vola azony rehetra dia voavidin'ny tra-boina ary ny fandikan-dalàna momba ny fifamoivoizana no voarakitra ao amin'ilay niharam-boinatantara. Ny fahafantarana ihany no nahafantarana ilay niharam-boina rehefa nahatsiaro izy ireo fa tara ny fandoavam-bola.
Ilay mpanafika dia mandresy lahatra ilay niharam-boina mba hanome fampahalalana manokana momba ny tsiambarateloamin'ny fihamboany ho toy ny maha-ara-drariny izay fantatry ny niharam-boina, ohatry ny banky iray.
Izany dia miteraka fandrahonana olona iray elektronika. Azo atao izanyamin'ny alalan'ny fampiasana mailaka, aterineto na fitaovana elektronika hafa.